SPORTS MYANMAR - Page3of 549 -
မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီမှာ အာဆင်နယ် အနိုင်မရနိုင်ကြောင်း ပြောကြားရင်း ဂန်းနား ကစားသမား နှစ်ဦးကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ပေါလ်မာဆင်
ဂန်းနား ဂန္တဝင် ကစားသမားဟောင်း ပေါလ်မာဆင် က အူဘာမီယန်း နဲ့ ဝီလီယံ တို့လို စတား ကစားသမားတွေ ခြေစွမ်းမပြနိုင်တာဟာ အာတီတာ အတွက် အဓိက ပြဿနာ ဖြစ်နေကြောင်း နဲ့ ဒီတစ်ပတ် မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီမှာ အာဆင်နယ် အနိုင်မရနိုင်ကြောင်း ဝန်ခံ သွားခဲ့ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် နဲ့ တော့တင်ဟမ် အသင်းတို့ဟာ ဒီတစ်ပတ် …
နိုဝင်ဘာလ အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ၅ ဦးကို ပြောပြလိုက်တဲ့ အလန်ရှီးယားရား
ဒီယေဂိုဂျိုတာကို နှစ်သက်တဲ့ သူတွေဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်း တိုးပွားလျက် ရှိနေပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ကြယ်ပွင့်ဟောင်း အလန်ရှီးယားရား ကလည်း လီဗာပူး စတားကို သူ့ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ၅ ဦး ထဲမှာ ရွေးချယ် သွားခဲ့ ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ဘရိုက်တန်နဲ့ ၁ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ …
ချဲလ်ဆီးမှာတုန်းက ပတ်ထရစ် ဘန်းဖို့ဒ် တိုးမပေါက်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း တချက် ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ #လမ်းပတ်
ယနေ့ည မှာ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ချ်ကွင်း မှာ ကစားမယ့် ချဲလ်ဆီး – လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် ပွဲဟာ ယခင် ချန်ပီယံရှစ် က Spygate ကိစ္စကြောင့် အငြိုး တချို့ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ဖရန့် လမ်းပတ် နဲ့ မာဆယ်လို ဘီယယ်ဆာ တို့ကြောင့် စိတ်ဝင်စားဖို့ ပိုကောင်းနေပါတယ် ။ နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အချက် …
မော်ရင်ဟို ရဲ့ နောက်ထပ် လန်ဒန်ဒါဘီ ၊ ဝံပုလွေ နဲ့ လိုင်ဗာငှက်တို့ ရဲ့ တိုက်ပွဲ ၊ ဟမ်းမား ကို ရင်ဆိုင်မယ့် သရဲနီ တို့နဲ့ . . . EPL Week 10 အတွက် Sky Sports ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
ဒီတစ်ပတ် မှာလည်း ပွဲကြီး ပွဲကောင်းတွေ ရှိနေ ပါတယ် ။ အသင်းကြီး တွေ ထဲ မှာ ဒီဇင်ဘာ အကြပ်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ မော်ရင်ဟို ရဲ့ စပါး ကတော့ နောက်ထပ် လန်ဒန် ဒါဘီ တစ်ပွဲ ကို ရင်ဆိုင် ရဦး မှာပါ ။ ဒီတစ်ခါ တော့ အာဆင်နယ် …
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ အသင်းရဲ့ ကွန်ပျူတာ စနစ် အတွင်း ချိုးဖောက် ဝင်ရောက်ကာ ငွေညှစ် နေတဲ့ ဟက်ကာ ကိစ္စ ကို တွန်းလှန် ဖြေရှင်း နိုင်ခဲ့ပြီ လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ မှာ …
မက်ဆီ ဟာ ရာသီ အကုန်မှာ အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ရီဗာဒို
ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ ကစားသမားဟောင်းကြိး ရီဗာဒို ကတော့ အသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီ ကို ဥက္ကဌသစ် လဲ ဆက်ထိန်းထားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သုံးသပ်လိုက်ပြီး ၊ ရာသီ အကုန်မှာ လမ်းခွဲဖွယ် ရှိနေတယ်လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်။ လက်ရှိ အခိုက်အတန့်တွေမှာလဲ မက်ဆီ ဟာ မန်စီးတီး ၊ ပီအက်စ်ဂျီ အသင်းတွေဆီ ပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့ သတင်းတွေ …
ဆုဖလားတွေ ရနိုင်ဖို့ ဘာလိုအပ်သလဲ ဆိုတာ ဖွင့်ဟရင်း ဈေးကွက်ထဲ လှုပ်ရှားဖို့မရှိကြောင်း အရိပ်အမြွက္ပြောလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် လက်ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ အက်ဒ် ဝုဒ်ဝါ့ဒ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ နည်းပြဖြစ်သူ အိုလီ ဂန်နား ဆိုးလ်ရှား ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် မြေမှာ ဆက်လက် ရှိနေဖို့အတွက် မရေမရာ ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် လက်ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ အက်ဒ် ဝုဒ်ဝါ့ဒ်ကတော့ နော်ဝေသား နည်းပြဖက်မှ ကာကွယ် စကား ဆိုသွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။ ဆိုးလ်ရှားဟာ …
တော့တင်ဟမ် နဲ့ ပွဲဟာ အာဆင်နယ် အတွက် ဘယ်လောက်အထိ အရေးကြီးသလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ အူဘာမီယန်း
December 4, 2020 - by Editor
အာဆင်နယ် နဲ့ တော့တင်ဟမ် အသင်းတို့ဟာ ဒီတစ်ပတ် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဥ်(၁၁) မှာ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံ နေကြပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ ၊ မြန််မာ စံတော်ချိန် ၁၁ နာရီမှာ ကစား သွားမှာပါ ။ အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ တော့တင်ဟမ် အသင်းဟာ ခါးသီးလှတဲ့ မြို့ ခံ ပြိုင် ဘက် …
အသာစီး ရယူလိုမှုအတွက် five sub ကို တောင်းဆိုနေတာလို့ ဆိုခဲ့တဲ့ ဂယ်ရီနဗီးရဲ့ မှတ်ချက်ကို လှလှပပ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ကလော့
လီဗာပူး မန်နေဂျာ ယာဂန်ကလော့က five sub rule ကို အကောင်အထည်ဖော်ကာ သူ့ရဲ့ အသင်း အတွက် အသာစီး ရယူဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ် ဆိုတဲ့ ပြောဆိုနေမှုတွေကို ပယ်ချလိုက်ပြီး ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ လူစားလဲမှု ၅ ကြိမ် ပြုလုပ်ခွင့်ကို ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင် သွားမယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ လီဗာပူး မန်နေဂျာက ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ …
ပရိသတ် အစစ်တွေလိုချင်တဲ့ မော်ရင်ဟို ၊ ပိတ်ရက်ပွဲမတိုင်ခင် ဒဏ်ရာ သတင်းတွေနဲ့ . . . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်း ရဲ့ နည်းပြကြီး မော်ရင်ဟို ကတော့ ယခု အပတ် မှာ ကစားရမယ့် အိမ်ကွင်း ပွဲစဉ် ကို ဝင်ရောက် ခွင့် ရမယ့် ပရိသတ် ၂၀၀၀ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွင်းထဲ လာရောက် ပျော်ပါးမယ့် သူတွေထက် စပါး အနိုင် ရမှာ ကို အမှန်တကယ် …
ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေကို သတင်းကောင်း တစ်ခု ပေးရင်း ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှောက် ကစားရတော့မယ့်အပေါ် ဝမ်းမြောက်စကား ဆိုလိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
လက်ရှိ ဘောလုံး ရာသီ အတွင်း မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို ကြည့်ရှု လိုက်မယ် ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက တောက်ပ ခဲ့တဲ့ မာရှယ် ၊ ရပ်ရှ်ဖို့ နဲ့ ဂရင်းဝုဒ်တို့ သုံးဦး အနက် ရပ်ရှ်ဖို့ တစ်ဦးတည်းသာ ပုံစံကောင်း တွေကို ဆက်လက် ပြသ …
အာဆင်နယ်ရဲ့ ကစားသမား ခေါ်ယူမှု အမှားတွေကို ထောက်ပြရင်း အာတီတာ ဟာ တာဝန်တွေ အများကြီး ယူထားရသလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဂျိုကိုးလ်
ချဲလ်ဆီး အသင်း ကစားသမားဟောင်း ဂျိုကိုးလ် က အာဆင်နယ် အသင်း ရဲ့ အခု နောက်ပိုင်း ကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့တွေဟာ လုံးဝ မှားယွင်းကြောင်း ထောက်ပြလိုက်ပြီး ဂျီရူး ကို ထွက်ခွာခွင့် ပြုလိုက်တာဟာလည်း မှားယွင်းကြောင်း ဆိုပါတယ် ။ ပြင်သစ် တိုက်စစ်မှူး အိုလီဗီယာ ဂျီရူး ဟာ အာဆင်နယ် အသင်းမှာ ငါးနှစ်ကြာ …